Ndiyo SEO uye nhepfenyuro yevanhu vanobatanidzwa here?
Simba reSocial Media uye nzira iyo iri kupera pamusoro penzvimbo ye Search Engine Optimization ingangove imwe yemibvunzo yakakanganisika. Ndinoreva zvakavanzika zvakadai: maitiro ehupfambidzani anokanganisa sei SEO? Ive aya mazano maviri anobata mukugadzirisa, kwete zvachose, kana kunyange chinhu kune icho?
Pano panouya muparadzi - mhinduro shoma ndeyekuti, inodaro. Asi zvingava zvakanyatsonaka kufunga nezvechipiri, yakareba uye yakazara kududzirwa. Ngatitarisei - huwandu hwemagariro evanhu hune chokwadi hune ukama kune SEO, asi inogona kuwirirana mushure mezvose here? Zvinosuruvarisa, ndiri kunzwa chokwadi chechinhu chimwe chete chiduku - huwandu hwemagariro evanhu hahuna, kana kuti hwakanaka, hunoita pane SEO. Izvo hazvibatsiri kutsvaga kutsvaga nenzira iyo vazhinji vevanhu vanodavira kuti inodaro.
Pasi pandinoenda kunobatanidza mazano angu nemamwe mazano anokosha anopiwa nhengo dzeboka reGoogle pacharo. Chokutanga pane zvose, ngatitorei zvishoma - kutsvakurudza kwenyika guru giant harina kumbobvira rave nekusimbiswa kwehuwandu hwemashoko ehuwandu hwepamusoro. Ndiri kureva, hongu, nhepfenyuro yemagariro ichiri pakati pemhando dzose dzinonzwisisika dzekuvandudza kuonekwa kwekwanisi kwezviri mukati. Uye hongu, pakupedzisira, zvose zvinoreva SEO. Ndezvipi zvatingaziva nezvehutano hwemagariro ehupfumi anokanganisa SEO? Pasinei nokuti mhinduro ipi yakarurama inogona kunge iri, zviri pachena kuti rubatsiro rwemagariro evanhu rinogona kubatsira chaizvo Search Engine Optimization yako inoshanda yose. Asi ini ndichiri kushamisika, ko chinzvimbo chikuru chinotsvaga chinogona kuunza zviratidzo zvehutano kune hutsika huripo hwehutsika here?
Kwenguva iyo, kuongororwa kweGoogle kutsvaga hakuna kumbobviswa. Ndokusaka nzira chete yokunzwisisa maitiro eGoogle's search bots ndiyo kutarisa chimwe nechimwe chinogona kuitika muhupenyu chaihwo. Iwe unogona here kufungidzira, kushandiswa kwenguva uye kushanda-kwakasimba izvi zvinotsvakurudza mabasa zvinogona kuva? Oka, ngatitangei kudzokera kune imwe nzvimbo. Nzira yekushamwaridzana nemagariro inobata sei SEO? Isu tinogonawo kutora rubatsiro rwemagariro evanhu pane chero chinhu, asi kwete chaicho chakananga pakatarisa, maererano nevakuru veGoogle. Zvakanaka, kunyange zvakadaro, hazvirevi zvachose kuti vhidhiyo yehupfumi haibatsiri pane zvikwereti zvachose, nemhaka yokuti yakagadziridzwa neGoogle kuti huwandu hwemagariro evanhu pachahwo hahumiriri hwehutachiona.
Ndinotenda kuti mhinduro yakawanda kana isina kudarika inogona kuonekwa pane imwe nzvimbo pamusoro peshoko rokuti "kuwirirana. "Sezvo iri izwi iri rakataurwa mumamiriro ekutorazve rekugadzirisa Dhiyabhorosi Inonzi White Paper yakabudiswa neSearchmetrics muna 2016. Ndine chokwadi chokuti varume vari kunyatsofamba nenzira yakanaka. Nokudaro, mhinduro chete yakarurama pamusoro pekuti huwandu hwemagariro evanhu hunobata sei SEO hunova pachena - hongu, inodaro. Asi pane huri huno hukama hwakananga kana huviri-hukama huripo. Nokudaro, kuchengeta ziso pakugadzirisa kuburikidza nekushandisa nzira dzakasiyana dzehupenyu hwemagariro evanhu zvichiri chisarudzo chakaumbwa zvakanaka. Panguva imwecheteyo, Search Engine Optimization inoda yako kushanda nesimba uye nguva nenzira yayo pachayo Source .